Dowlada Uganda ayaa go’aansatay inay kala baxayso ciidamadeeda UPDF ee ku sugan Soomaaliya | Somaale.com
Dowlada Uganda ayaa go’aansatay inay kala baxayso ciidamadeeda UPDF ee ku sugan Soomaaliya
Dowlada Uganda ayaa waxa ay go’aansatay inay kala baxayso ciidamadeeda UPDF ee ku sugan Soomaaliya iyo ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ee qaarada Afrika si ay ciidamadeeda u ilaaliyaan xadka galbeed ee ay la leedahay wadanka jamhuriyada Dimuqraadiga Kongo sida ay qortay New Vision.
Ra’iisal wasaare Amama Mbabazi ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa isagoo ka jawaabayay qoraal ka soo baxay hogaamiyaha mucaaradka dalka Uganda oo ah sida ay dowlada Uganda uga jawaabtay warbixin si hoose uga soo baxday Qaramada Midoobay oo ah in dowlada Uganda ay kaalmo siisay jabhada M23 ee jamhuuriyada dimuqraadiga Kongo.
Mr Mbabazi ayaa sheegay in Uganda ay u dirtay wasiir Qaramada Midoobay si uu cabasho ugu muujiyo ereyada loo isticmaalay warbixinta sida qarsoodiga ah uga soo baxday QM ee ah in dalka Kongo ay arrimaheeda ugu lug leedahay iyo sida ay ugu guuldareysteen wadamada reer Galbeedka ah inay aqoonsadaan arrimaha nabadda ah ee ay ka qabatay gobolka.
Ciidamada ugu badan ee nabad ilaalinta ah eek u sugan dalka Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin ciidamo ka yimid dalka Uganda.
C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa beeniyay wararka sheegaya in hawada somalia laga maamuli doono meel ka baxsan magaalada muqdisho